सरकारी भवन होटललाई, स्थानीय निकाय भाडामा
सुनसरी (अस) । आफ्नै भवन नहुँदा स्थानीय तहहरूले भाडामा लिएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, धनकुटा जिल्ला समन्वय समितिले भने सरकारी भवनमा होटल सञ्चालन गर्न दिएर अन्य सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन गरिरहेको छ । धनकुटाको साँगुरीगढी गाँउपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ६ स्थित भेडेटारमा रहेको सरका...
प्रदेश–१ मा ६२ पुल बन्दै
विराटनगर (अस) । प्रदेश नम्बर १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अरुण, तमोर, सुनकोशीलगायत नदीमा ठूला तथा साना गरी ६२ ओटा पुल निर्माण शुरू गर्ने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा बन्ने ती पुल निर्माणको शुक्रवार शुरुआत गरे । मन्त्री आङ्बोले...
काबेली तेस्रोको निर्माण शुरू
ताप्लेजुङ (अस) । ताप्लेजुङस्थित काबेली तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बिहीवारदेखि शुरू भएको छ । काबेली हाइड्रोपावर कम्पनीले काबेली खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजनाको क्षमता २२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत याम भण्डारीले इन्टेकमा जाने सडक शुर...
काबेली तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु, ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, ४ अर्ब ५० करोड लागत
सन्तोष पुर्कुटी वैशाख १३, ताप्लेजुङ । काबेली तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । काबेली हाईड्रोपावर कम्पनीले ताप्लेजुङस्थित काबेली खोलाबाट उत्पादन गर्न लागेको २२ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य बिहीवारबाट शुरु भएको हो । विधिवत पुजा गरेर स्काभेटर मेशिनले ईन्टेकमा जाने स...
मालपोत र नापीका ५ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
धरान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किर्ते हकवालाको नाममा जग्गा नामसारी गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय र नापी शाखा धरानका ५ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मंगलवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । ३ वर्षअघि धरान–१४ स्थित दुई धारे पथमा रहेको खगेन्द्र कुमा...
विदेशमा पाएको दुःख सम्झदै कृषिमा होमिए युवा
वैशाख ११, सुरुंगा(झापा) वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा १२ वर्ष कतारमा परिश्रम गरेर स्वदेश फर्किएका बाह्रदशी गाउँपालिका ५ का दिनेश थापाले आजकल स्वदेशमै व्यवसाय शुरु गरेका छन् । उनी मात्र होइन, झापाका थुप्रै युवा विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउनुको साटो स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले कृषि पेशामा सं...
११ वैशाख, ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा भएको औद्योगिक महोत्सवले रू. १८ करोड आम्दानी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको ११ दिने महोत्सवमा विभिन्न शीर्षकमा रू. १८ करोड उठाएको हो । पहिलोपटक जिल्लामा आयोजना गरिएको औद्योगिक महोत्सवमा रू. १८ करोडको कारोबार भएको संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार मास्केले बत...
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न चियामजदुरको मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वैशाख ९, विराटनगर । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न माग गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन प्रदेश नम्बर १ ले सोमवार प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनले चियाश...
विद्युत प्राधिकरण बक्यौता महसुल उठाउन ताकेता गर्दै
वैशाख ९, विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर शाखाले विभिन्न कार्यालय तथा संस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षमा रू. ४ करोडभन्दा बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । छुट बिलिङतर्फ रू.४ करोड २४ लाख ६४ हजार २६६ रहेकाले स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा पठाएको इन्जिनियर पंकजकुमार गोहितले जानकारी...
सगरमाथाको १ हजार किलो फोहर काठमाडौंमा
वैशाख ८, सोलुखुम्बु । सगरमाथा सरसफाइ अभियानअन्तरगत् यस क्षेत्रमा संकलन गरिएको १ हजार किलो फोहर काठमाडौं लगिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् १ हजार किलो फोहर काठमाडौं र १ हजार किलो फोहर ओखलढुंगा लगिएको अभियानमा सहभागी संस्था सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेले जानकारी दिएको छ । विभिन्...